मेयर चौधरी विज्ञप्ति निकालेर उम्किन पाउँछन् ? (विज्ञप्तिसहित पढ्नुस्):: Artha Dabali
मेयर चौधरी विज्ञप्ति निकालेर उम्किन पाउँछन् ? (विज्ञप्तिसहित पढ्नुस्)
काठमाडौं / इटहरी नगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले एक करोड रुपैयाँ छुट्याएर ‘पत्रकारको नाकको हड्डी भाँच्न खोजेको विषय मडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि उनी एकाएक विरोधमा तानिए ।
आफैंले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति उनले दुइ दिन पनि टिक्न नदिई फिर्ता लिएको जनाए । विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर त्यस्ता शब्द प्रति माफी माग्दै भ्रष्टचार विरुद्ध सबैले एक हुनु पर्ने वताए । तर, एक जनप्रतिनिधिले आफूले बोलेको निराधार विषय फिर्ता लिएर सुख पाउँछ ? आजको आम विषय हो ।
मिडियामा तहल्का मच्चाउन मात्र उनले यस्तो बोलेका थिए वा आक्रोश ? राज्य प्रशासनले नै त्यसको छानविनमा ल्याउनु पथ्र्यो । जन प्रतिनीधि नै यस्तो बोलेपछि सुरक्षा संयन्त्रको अर्थ के रहन्छ । तर, यता
मेयर चौधरीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आवेगजन्य परिस्थितिका कारण आफूले त्यस्तो भन्न पुगेको स्पष्टिकरण दिएर उम्केका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मेरो भनाइहरुबाट उहाँ र सञ्चार जगतमा पर्न गएको चोटप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रेस जगतलाई आघात गर्न गएकोमा व्यक्त विचार फिर्ता लिन चाहन्छु ।’
उनले आफू उदण्ड नभई अनुशासित व्यक्ति भएको र सञ्चार जगतप्रति चोट पुर्‍याउने आफ्नो मनशाय नभएको समेत बताएका छन् । मेयर चौधरीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभियान जारी रहेको र यसमा सञ्चार माध्यमको रचनात्मक भूमिका चाहिने बताएका छन् ।
पढ्नुस विज्ञिप्ति जस्ताको तस्तैः